Suldaan ka digay Halista Dabinno hor leh oo uu sheegay inay Somaliland u maleegayaan Cadawgeedu | Ogaalnews	CIMILLADA HARGEYSA
Suldaan ka digay Halista Dabinno hor leh oo uu sheegay inay Somaliland u maleegayaan Cadawgeedu
TweetHargeysa, 26 May, 2012 (Ogaal)- Suldaan Cabdillaahi Cabdi Koor, oo ka mid ah Salaaddiinta deegaannada gobolka Sanaag-Bari, ayaa ku baaqay in Somaliland looga baahan yahay iyadoo isku duuban inay ka dabbaalato dabinno uu sheegay in cadowgeedu u maleegayaan.
Suldaan Cabdillaahi Cabdi Koor wuxuu sidaasi ka sheegay ka dib markii shalay subax si diirran loogu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa oo uu socdaal ku yimid, iyada oo siyaasiyiinta iyo wax-garadkii soo dhaweynayey ay kaga hor-tageen Tuulada Haleya ee Bariga Hargeysa. Suldaanka oo Khamiistii soo gaadhay magaalada Berbera ka dib markii uu ka soo kicitimay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag, waxa duleedka Hargeysa ku soo dhaweeyay Salaaddiin, Siyaasiyiin kala duwan iyo dadweyne badan oo reer Somaliland ah.
Suldaan Cabdillaahi Cabdi Koor waxa uu soo dhawayntiisa ka dib ka hadlay socdaalkiisa magaalada Hargeysa oo uu tilmaamay inuu marti-qaad ka helay Xukuumadda Somaliland. Suldaanku wuxuu ka digay wax uu ugu yeedhay dabinno Somaliland uu la maaggan yahay cadowgeedu. “Xilligan dabinnada innoo yaalla waxa la doonayaa inaynu ka dabbaalanno oo aynu ka digtoonaanno innaga oo Somaliland midnimadeenna muujinayna isku tanaasul haddii ay tahay Xukuumadda, Madax-dhaqameedka, ururrada siyaasadda iyo guud ahaanba shacabka Somaliland, waxaanan leeyahay yaan la innaga danaysan ee innagu danteenna iyo dawladnimadii iyo himiladeenna aynu lahayn aynu gaadhno.”
Suldaan Cabdillaahi waxa uu ka hadlay socdaalkiisa xilligan ee magaaladda Hargeysa, waxaanu yidhi; “Waxaan ku imid Casuumad aan ka helay Xukuumadda Somaliland, sidaa daraaddeed, waxaan Xukuumadda hadda jirta u soo jeedinayaa inay wax gaadhsiiyaan gobolka Sanaag oo waliba si dhab ah u gaadhsiiyaan. Annaga oo Xukuumadihii hore-ba kaga caban jirtay arrintan, laakiin waxaannu rejaynaynaa in Xukuumaddani dhammays-tirto waxyaalaha ka dhiman gobolka Sanaag si uu gobolkaasi u helo xaqa uu leeyahay u gana mid noqoto dhinaca horumarka caasimadda Somaliland.”
Maxaad ka taqaanaa astaamaha Cudurka Qoorgooyaha iyo sida loo daweeyo ? - 32,822 viewsSomaliland: If Eritrea & South Sudan Could Gain Sovereignty, So Could Somaliland - 17,148 viewsSomaliland hopes for international recognition - 15,776 viewsGaddafi:’It’s a conspiracy to take our oil and a plan to re-colonise our country’ - 14,858 viewsHead of Uganda EC: I will announce winner within 48 hours - 11,773 viewsDalalka adduunka ugu farxadda badan iyo sida ay u kala horreeyaan - 11,540 viewsSomalia: Exposing the Hideous Face of the Puntland Regime - 11,449 viewsTel Aviv: Hostage Drama in Turkish Embassy - 11,168 viewsIGAD with the Largest Donors Delegation arrives Somaliland - 10,880 viewsSomaliland Coastguards and Ground Troops—The Real Panacea for Sea Piracy - 10,826 views